पोडकास्टिंगले लोकप्रियता र मोनेटाइजेशनमा बढ्न जारी राख्दछ Martech Zone
बुधबार, सेप्टेम्बर 12, 2018 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
हामीसँग हाम्रो 4+ एपिसोडहरूको लगभग 200 मिलियन डाउनलोडहरू छन् मार्केटिंग पोडकास्ट मितिमा, र यो बढ्न जारी छ। यति धेरै कि हामी हाम्रो मा लगानी पोडकास्ट स्टुडियो। म वास्तवमै एक को डिजाइन चरणहरूमा छु नयाँ स्टुडियो जुन म मेरो घर फर्किरहेको हुन सक्छ किनकि म आफैँ कि त भाग लिइरहेको छु वा यति धेरै पोडकास्टहरू पाइरहेको छु।
२०० 2003 मा यसको नम्र शुरुआतबाट पोडकास्टि content सामग्री विपणनको लागि रोक्न नसक्ने शक्ति भएको छ र यसले रोक्ने कुनै स shows्केत देखाउँदैन - २०० - पछि सक्रिय पोडकास्टको संख्या आकाशमा छ। जोन नास्टोर
२०१ P पोडकास्ट तथ्या .्क
पोडकास्ट श्रोताहरूले प्रति हप्ता औसत shows कार्यक्रमहरू सुन्छन् जुन २०१7देखि %०% माथि छ
त्यहाँ over550,000०,००० सक्रिय पोडकास्टहरू छन् १०० भन्दा बढी भाषाहरूमा १ 100. 18.5 मिलियन एपिसोडहरू अनलाइन उपलब्ध छन्
पोडकास्टिंगका शीर्ष gen विधाहरू समाज र संस्कृति, व्यवसाय, हास्य, समाचार र राजनीति, र स्वास्थ्य हुन्
अमेरिकी जनसंख्याको% 64% शब्दसँग परिचित छ पोडकास्टिङ
अमेरिकी जनसंख्याको% 44% ले पोडकास्ट सुनेको छ, २%% हरेक महिना पोडकास्ट सुन्छन्, १%% साप्ताहिक,%% उत्साही प्रशंसकहरूको साथ
पोडकास्टहरूका लागि प्रमुख डेमोग्राफिक २-25--34 बर्षे उमेरका हुन्छन्, विज्ञापनको साथ पुग्न अक्सर गाह्रो डेमोग्राफिक हुन्छ
पोडकास्ट श्रोताहरू कलेज डिग्रीको 45 37% बढी हुन सक्छ र% %०% को वार्षिक आम्दानी $ १०,००० वा सो भन्दा बढी
के परिवर्तन हुँदैछ कि पोडकास्टहरू यति लोकप्रिय छन्?
केही वर्ष उल्टाउनुहोस् र खानुहुन्छ पोडकास्टहरू एक जटिल कार्य थियो। यदि तपाईंसँग आईओएस उपकरण छ भने, तपाईंले आफ्नो उपकरणलाई डक गर्न र आईट्यून्ससँग सिnch्क्रोनाइज गर्नुपर्दछ पोडकास्टहरूको सदस्यता लिइसके पछि। जहाँसम्म, उपकरणहरूको उन्नत र ब्रॉडब्यान्ड जडानहरू सामान्य भएको छ, स्ट्रिमिङ पोडकास्टहरू सामान्य भएको छ। एप्पल संग छ पोडकास्ट अनुप्रयोगर त्यहाँ पनि छ Stitcher, TuneIn, BlogTalkRadio, र मोबाइल अनुप्रयोगहरू सजिलै खेलाडीहरू एकीकृत गर्न सक्दछ।
तपाईंको बिहान जोग वा दिउँसो बाइक सवारीको समयमा सुन्नुको साथसाथ, स्मार्टफोन र अटोमोबाईलहरूको सिमलेस एकीकरणले पोडकास्टलाई तपाईंको बिहान र दिउँसो कम्युटमा सुन्न आवश्यक छ। मेरो विचारमा, म विश्वास गर्दछु यो व्यवसाय पोडकास्टहरूको साथ वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो।
खपत मात्र परिवर्तन हुँदैछ, ब्यवहार पनि हो। जसरी व्यक्तिहरू बसिरहेका र घण्टासम्म नेटफ्लिक्स हेर्ने गर्दछ, हामीले पत्ता लगायौं कि हाम्रा श्रोताहरूले एकै बैठकमा हाम्रो पोडकास्टको घण्टा सुन्नेछन्। २०१ 2016 कारमा नयाँ अडियो इन्टरफेस मानकका साथ यसलाई जोड्नुहोस् जुन पोडकास्टहरू उपभोग गर्न सक्दछ ... र माग गरिएको अडियो बन्द हुनेछ जुन हामीले पहिले कहिल्यै देखेका थिएनौं!
माथि उत्पादन छेउमा, पोडकास्टिंग धेरै सजिलो हुँदै गइरहेको छ। यसलाई ध्वनि-प्रूफ स्टुडियो, महँगो माइक्रोफोन, र रेकर्डि forको लागि मिक्सर आवश्यक पर्दछ ... त्यसपछि यसलाई अडियो सम्पादकमा ट्यून गर्न र ट्वीक गर्नका लागि पठाउँदै। मैले हालैमा सडकमा केहि पोडकास्ट गरें जूम H6 रिकॉर्डर र एक सेट शुर एसएम 58 माइक्रोफोनहरू - र पोडकास्टहरूको स्पष्टता अविश्वसनीय थियो। हेक, को साथ शुरू गर्न सक्नुहुन्छ एch्कर पोडकास्ट अनुप्रयोग, र एक राम्रो ब्लुटुथ हेडसेट काम उत्कृष्ट।
मिडिया उपभोग दुबै प्रविधि र नयाँ प्याराडाइमहरूद्वारा नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुने संकेतहरू देखाउँदै छ। 'पहिलो स्क्रिन' को रूपमा मोबाइलको बढ्दो उपयोगिता, साथसाथै वैकल्पिक सामग्री फारामहरूको उदय, जस्तै पोडकास्टहरू र ऑन-डिमांड भिडियो सेवाहरूबाट 'बिन्जेबल' सामग्री हाम्रो मिल्दो छोटो छ भन्ने मिथ्यालाई खण्डित गर्दैछ। टम वेबस्टर, रणनीति को एडिसन उपाध्यक्ष
पोडकास्टिंग मुद्रीकरण: यो हुदै छ
पोडकास्टिंगको यति धेरै वर्ष पछि, म केही प्रायोजकहरूको माध्यमबाट सभ्य राजस्व पनि पाउँदै छु (धन्यवाद विज्ञापनकास्ट)। किनकि मेरो पोडकास्टहरू केहि केहि महिनाहरू 10k + सुन्न पाउने सम्भावना छ, विज्ञापनदाता प्रति एपिसोड धेरै सय डलर तिर्दै छन्। त्यो धेरै जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले समय तालिका, रेकर्ड, र पोडकास्टहरू प्रकाशन गर्न सार्थक बनाउँदछ। र पाठ र भिडियो विपरीत, पोडकास्टिंग विज्ञापनको लागि उत्कृष्ट छ किनकि तपाईं श्रोताको ध्यान हुनुहुन्छ। अवश्य पनि, म सुनिश्चित गर्दछु कि मेरो विज्ञापनदाताहरू सान्दर्भिक र मेरो श्रोताहरूका लागि मूल्यवान छन् - मलाई लाग्छ कि यो साँचो हो। तपाईं मेरो मा गद्दा बेच्न कोशिश गरेको सुन्नुहुने छैन मार्केटिंग अन्तर्वार्ता!
यदि तपाईंको उद्योगमा कुनै लोकप्रिय पोडकास्टहरू छैनन्, यो समय सुरू गर्ने समय हो! यो सबै यहाँबाट छ!
टैग: 2018एडिसन अनुसन्धानIABमार्केटिंग पोडकास्टम्युजिकूमफNielsenप्रशान्त सामग्रीपोडकास्ट कोटीहरूपोडकास्ट खपतपोडकास्ट वृद्धिपोडकास्ट तथ्या .्कपोडकास्ट तथ्या .्कपोडकास्ट स्टुडियोपोडकास्टिङपोडकास्टि growth वृद्धिपोडकास्टिंग तथ्या .्कpwc